SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Aan wada xariirno | WSDOT
SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Aan wada xariirno
homeConstruction & planningOnline open housesSR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b)Aan wada xariirno
Warcelintaadu waa noo muhiim waxaanan soo dhawaynaynaa talooyinka dadwaynaha inta uu socdo mashruuca. Nagala soo xidhiidh su’aalo ama faallooyin wakhti kasta adigoo iimaylka ugu soo diraya sr509construction@wsdot.wa.gov.
Cinwaan VI Ogeysiis dadweyne
WSDOT waxay hubineysaa in si buuxda loogu hogaansamo Cinwaanka VI ee xeerka xaquuqda madaniga ee 1964 kaasoo mamuucaya takoorka ka dhanka ah qof kasta iyadoo loo eegayo isir, midab, asalka meeshuu ka soo jeedo ama jinsigiisa marka la bixinaayo faaidooyinka iyo adeegyada ka yimaada barnaamijyada iyo adeegyada federaalku kaalmeeyo. Wixii warbixin dheeraad ah oo khuseeya barnaamijka Cinwaanka VI ee WSDOT waxaad kala xiriirtaa iskuduwaha waaxda Cinwaanka VI taleefoonka 360-705-7098.
Xeerka Naafada Maraykanka (ADA) Warbixin:
Warbixintaan waxaa lagu heli karaa qaab kale ayadoo iimayl loo soo dirayo Xafiiska Fursadaha loo siman yahay (the Office of Equal Opportunity) iimaylkuna waa wsdotada@wsdot.wa.gov mise wacitaan la soo Waco taleefoonka bilaashka ah ee 855-362-4232. Dadka dagaha la’ ama maqalkoodu culus yahay way codsan karaan ayagoo soo wacaayo Washington State Relay nambarkana ka wacaayo 711.